Ururka ONLF, ee Nabada Qaatay oo ka Bilaabay Olole Siyaasadeed oo Dibada – Rasaasa News
Ururka ONLF, ee Nabada Qaatay oo ka Bilaabay Olole Siyaasadeed oo Dibada
Ururka ONLF, ee nabada la saxiixay dawlada Atobiya bishii October 2010, oo mudo ka maqnaa saaxada siyaasada ayaa olole siyaasadeed oo balaadhan ka bilaabay dalalka dibada, arintaas oo aan la ogayn sababta keentay xiligan oo Jwxo-shiil, saaxada ka baxay.
Ururuka oo haystay taageero shacab oo aad u balaadhan, ayaa heshiiskii nabada ka dib, waxaa dhaqdhaqaaqii nabad doonka ahaa kala wareegay, ururo shacab oo ay abaabushay DDSI, oo loogu magac daray Qurba joogta DDSI.
Ururada Qurba joogta oo ka furtay xafiisyo gudaha dalka, ayaa waxaa ku baxay miisaaniyad aad u badan, miisaaniyadaas oo u badan Tigidho iyo habeen dhaxyo la siiyey boqolal ruux oo ku nool dalalka reer galbeedka.
Waxaa kale safaro badan dibadaha ugu soo baxay masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Itobiya, si ay warbixino u siiyaan qurbo joogta u dhalatay degaanka, arintaas oo ay masuuliyiintu ku guulaysteen.
Hadaba, sida ay sheegayaan ama laga dareemayo dhaqdhaqaaqyadan cusub ee eegga uu bilaabay ururkii nabada qaatay, ayaad moodaa in lagu xoojinayo safarkii ugu dambeeyey ee masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Itobiya oo uu ka muuqday biyo diid sabab keentayba.
Ururka ayaa shirar aad u balaadhan waxaa uu ku qabtay dhawr meelood oo dalka Maraykanka ah, Dalka Kenya iyo dalka South Afrika. Ololahan oo uusan ururku wali hore u galin intii uu nabada qaatay iyo intii ka horaysay midna, ayaa la isweydiin karaa waxa hada keenay.
Waxaa kale oo iyana si hoose u socota, in xubno ka mid ah ururka ONLF, ee nabada qaatay ay isgarabsanayaan xubno dhawra oo ka horjeeda Madaxeynaha Dawlad Degaanka Somalida Itobiya, xubnahaas oo hore shaqada looga eryey, joogana Addis Ababa.
Ololahan uu bilaabay ururuka nabada qaatay ee ONLF, ayaan la ogayn wax hada kalifay in ay olole dib u bilaabaan. Maadaama uu ururku sheegay in uu ku guulaystay nabadii uu saxiixay, isbadal balaadhan oo nabadeedna uu ka dhacay DSI.
Dhinaca kale kooxdii Jwxo-shiil, ee nabada diiday ayaan haysanin wax taageero shacab ah, una muuqata in ay ka baxayso saaxada siyaasadeed, laggagana adkaaday qorigii dabka ahaa.
Kooxdan oo meelihii ugu dambayay ee ay taageerada ku haysatay laga caydhiyey, xubnana laggaga xidh xidhay.